ငါး၊ ဖက်ဖယ်ရွက် ချဉ်စပ်ဟင်းလေး ချက်စားကြည့်ရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ငါး၊ ဖက်ဖယ်ရွက် ချဉ်စပ်ဟင်းလေး ချက်စားကြည့်ရအောင်
ငါး၊ ဖက်ဖယ်ရွက် ချဉ်စပ်ဟင်းလေး ချက်စားကြည့်ရအောင်
Posted by may flowers on Sep 6, 2012 in Food, Drink & Recipes | 10 comments
ကဲ..ဒီနေ့တော့ အိမ်မှာချက်စားဖြစ်တဲ့ ငါးဟင်းဖက်ဖယ်ရွက် ချဉ်စပ်ဟင်းလေးကို ရွာသူားတွေကို လည်းကျွေးချင်လို့ ..မိုးအေးအေးမှာ အရည်စပ်စပ် ချဉ်ငန်စပ်
ငါးဟင်းလေးနဲ့ ဆိုတော့ခံတွင်းတွေ့မှာ သေချာပါတယ်နော်..။ဆီပြန်တွေ၊ အကြော်ဟင်းတွေ စားရတာအီလာလို့ရင်လည်း ဒီလိုဟင်းလေးတစ်ခွက်က ကျန်းမာ
ရေးနဲ့လည်း ပြည့့်စုံ၊ အဟာရလည်း ပြည့်စုံပြီး ထမင်းစားမိန်မှာ ကျိန်းသေးပါပဲလို့…။ ကဲ စချက်ကြရအောင်-
-ငါး – ၃ဝသား ခန့်
– ကြက်သွန်နီ ဥကြီး သုံးဥ
– ကြက်သွန်ဖြူ ၈ မွှာ
– ရှမ်းနံနံ (တစ်စည်း)
– ပင်စိမ်း (တစ်စည်း)
– ဖက်ဖယ်ရွက် (တစ်စည်း)
– မရမ်းပြားခြောက် =ဆယ်ပြားခန့် ( မရှိပါက ဟင်းကျက်သွားမှ သံပုရာသီး တစ်လုံးခန့်အရည်ညှစ်ထဲ့ပါ)
– ခရမ်းချဉ်သီး (နှစ်လုံး)
– ငံပြာရည် ( ထမင်းစားဇွန်းနဲ့ နှစ်ဇွန်းခန့်)
– ဆီ ( တမင်းစားဇွန်းနှင့် တစ်ဝက်ခန့်) မထဲ့ပဲချက်ပါကလည်း ရပါတယ်။
– ငရုတ်သီးတောင့် (ဆယ်တောင့်ခန့်)
– ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် ( ကော်ဖီဇွန်း တစ်ဇွန်း)
– နနွင်းမှုန့် (အနည်းငယ်)
တို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ ကို နှုတ်နှုတ်စင်းထားပါ။ ပြီးတော့ ငရုတ်သီးတောင့်တွေကို ပါးပါးလှီး၊ ဖက်ဖယ်ရွက် တစ်ဝက်၊ ရှမ်းနံနံ တစ်ဝက်၊ ပင်စိမ်းတစ်
ဝက် ဆီကို နှုတ်နှုတ်လှီးထားပါ။ မရမ်းပြားကို လည်းလှီးထားပါ( မရမ်းပြားမရှိပါက ဟင်းအိုးချခါနီးမှ သံပုရာသီးတစ်လုံးခန့်ကို အရည်ညှစ်ထဲ့လိုက်လို့လည်း ရ
ပါတယ်) ခရမ်းချဉ်သီးနှစ်လုံးကိုလည်း ပါးပါးလှီး ပြီးနောက် အနေတော်တုံးထားသော ငါးထဲသို့ ငံပြာရည် ၊ ဆားနနွင်း၊ ဟင်းခတ်မှုန့် ဆီအနည်းငယ်၊ နှင့် လှီးထား
စင်းထားသော ကြက်သွန်နီ၊ဖြူ၊ မရမ်းပြား၊ ရှမ်းနံနံ၊ ဖက်ဖယ်ရွက်၊ ပင်စိမ်းရွက် ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းတောင့် ၊ ငရုတ်သီးမှုန့် စသည့်ပါဝင်ပစ္စည်း အားလုံးကို အိုးထဲတွင်
နှံသည်အထိရော နယ်ပါ.။ ပြီးမှ လုံးရေအနည်းငယ်ထဲ့ကာ ချက်ထားလိုက်ပါ၊၊ အရမ်းမမွှေပေးပါနှင့် ။ ငါးများမကြေသွားစေရန် ဖြေးဖြေးလေး အိုးကိုလှုတ်ပေးပါ
ငါးများကို ရောနယ်ကတည်းက အရသာကဝင်သွားပြီးဖြစ်သောကြောင့် မမွှေပဲ ဖြေးဖြေးလေးလှုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုရေ ခမ်းပါက ကိုယ်လိုသလောက်ရေ
အချိန်အဆ ထပ်ထဲ့ကာ ပြန်ချက်ပေးပါ။ ထိုရေဆူလာပါက မူလက ချန်ထားသော ဖက်ဖယ်ရွက် ၊ ရှမ်းနံနံ ၊ ပင်စိမ်းရွက်များ ထပ်အုပ်ကာ ငါးချဉ်စပ်ဖက်ဖယ်ရွက်
ဟင်းတစ်ခွက်ကို အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ချဉ်ချဉ် စပ်စပ်နဲ့ မအီပဲ အရသာရှိစေမဲ့ ငါးဟင်းတစ်ခွက်ပါနော်..။
ဒါက ငါးဟင်းချဉ်စပ်လေးနဲ့ တွဲစားလို့ရအောင် အရံဟင်းအဖြစ်ကြော်ထားတာ ။ ကန်ဇွန်းရွက် ပဲပင်ပေါက်ကြော် အားပေးဦးနော်..။
ရွာသူ၊ ရွာသားတွေလည်း အဟာရနဲ့ ပြည့်စုံပြီး မိုးအေးအေးမှာ ထမင်းမိန်စေမဲ့ ငါးနဲ့ဖက်ဖယ်ရွက် ချဉ်စပ်ဟင်းလေးကို ကိုယ်တိုင်ချက်စားကြည့်လိုက်ပါနော်။
ကြက်ကချင်ချက်ကိုဖက်ပယ်နဲ ့ချက်တာစားဖူးလို ့
ရန်ကုန်မှာဆိုရင် ဘယ်မှာဝယ်လို ့ရလဲဗျ
ဒီနေ့မနက်ပိုင်း အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ ခုနကမှ နေ့လည်စာထမင်းစားရတယ်၊ ထမင်းဂျိုင့်က ငါးဖယ်ကြော်နဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီးချက်ပါလာပြီး ရွာထဲကြည့်လိုက်တော့ မမေရဲ့ငါးဟင်းအရည်လေးနဲ့တွေ့တာမို့ ဘယ်ရမလဲ ယူပြီးစားပစ်လိုက်တာ ကောင်းမှကောင်းဗျာ။ ကန်ဇွန်းရွက် ပဲပင်ပေါက်ကြော်တော့ မစားဖြစ်လိုက်ဘူးလေ။
အရမ်းကို ကြိုက်မိသွားပြီ မေလေးရေ . ငါးဖက်ဖယ်ဟင်းကိုပါ
ငါးကိုလည်း ကြိုက်တယ် အဆီလည်း မပါတာမို့ လုပ်စားကြည့်ပါဦးမယ် … ။
ဒါနဲ့ မေဖလားဝါးရေ …. ကျွန်မသိချင်တာကလေ ၊ ဟင်းထဲမှာ ငရုပ်သီး အရောင်တွေ့ပါတယ် ။ ဆီသတ်တုန်းက ထည့်လိုက်တာလား လုံး ချက်အနေနဲ ့ထည့်လိုက်သလား ဆိုတာပါ ။ ဆီသတ်တုန်းကသာ ငရုပ်သီးအရောင်တင်မှုန့် ကို ထည့်မယ်ဆိုလျှင် ဆီ ဇွန်းတဝက်စာလောက်နဲ့ မလောက်နိုင်လောက်တော့လို့ပါ ။
ပင်စိမ်းရွက်ထက် ပျဉ်းတော်သိမ်းအရွက်ကို ပိုကြိုက်လို့ …… အစားထိုးလုပ်ကြည့်ဦးမယ် ။
မသိသေးတဲ့ ဟင်းချက်နည်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော် ။
ကန်စွန်းရွက်ဆိုလို့ ….. ကျွန်မ ဒီရက်ပိုင်း ညဘက်တိုင်းမှာ ကန်စွန်းရွက်ချည်း စားဖြစ်နေတယ် … ဘယ်လောက်စားစား မမုန်းတဲ့ အရွက်ပါပဲ ။ ကန်စွန်းရွက်ကြော်ဆိုလျှင် မှိုတွေ ၊ ဘာတွေ နဲ့ ရောတာထက် ပလိန်းကြော်တာကို ပိုကြိုက်တယ် ။ ကြက်သွန်ဖြူလေး ဓါးပြားရိုက်ထည့် ၊ ငရုပ်သီးစိမ်းလေးထက်ခြမ်းခွဲထည့် ၊ ကော်ရည်လေး နည်းနည်းနဲ့ ငရုပ်ကောင်းမှုန့်လေး နည်းနည်းသုံးပြီး …… စိမ်းစိမ်းစိုစိုလေး ကြော်ထားတဲ့ ကန်စွန်းရွက်တစ်ခွက်ဆိုလျှင် …. အရမ်းကြိုက်ပေါ့ ။ နေ့တိုင်းစားတာတောင် ရိုးအီမသွားပါဘူး ….. ပြောရင်း …. ရှလွတ် .. ရှလွတ် …..
ဟင်းအရည်လေးကတော့ စားချင်စရာလေး ဒါပေမယ့် အရွက်တွေပါတာ အဲဒီအနံတွေကို မကြိုက်ဘူး … ဟင်းအရည်လေးကို ဒီအတိုင်းသောက်ရင် ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးနေမှာသေချာတယ် ……
ကို surmi ရေ အရင်ကတော့ ကိုးမိုင်က အိုးရှင်းမှာ.အဲဒီဖက်ဖယ်ရွက်တွေရောင်းတာ တွေ့မိတယ်.
စားပါ စားပါ ကိုခင်ခရေ စားစေချင်လို့ပဲဟာ..။
ကိုပေရေ ကူးလည်းကူး ၊ စားလည်းစားသွားပါနော် အိုးလိုက်ချထားတယ်နော်။
လုံးချက်ချက်တာပါ etone ရေ…ဆီနဲနဲလေးပါတာပါ ခရမ်းချဉ်သီးအရောင်နဲ့ ငရုတ်စိမ်းမှုန့်နဲနဲပါလို့
ခိုင်ခိုင်ရေ ဒီအတိုင်းလေးချက်လည်းကောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့ တစ်ခါမှတော့စမ်းမချက်ကြည့်ဖူးဘူး ငါးကိုလုံး
ချက်ချက်တာဆိုတော့ မညှီအောင်အမွှေးရွက် အစုံသုံးချက်ထားတာပါ။
ကချင်တွေဟင်းချက်ရင်အဲဒီဖက်ဖယ်ရွက်သုံးတယ်..ကျမတို့ဈေးမှာမရှိဘူး. မြေနီကုန်းဈေးမှာတော့ ရောင်းတယ်လို့ပြောတယ်..စားကောင်းမယ့်ပုံလေးပဲ.. အရွက်တွေ့ရင်ချက်စားလို့ရအောင်နည်းကူးသွား တယ်နော့. မမေဖလားဝါးကဟင်းချက်ကောင်းမယ့်ပုံပဲ..အရင်တခါလည်း ဖက်ကဖောင်းချက်လေးတင်တာ တကယ့်ကိုစားချင်စဖွယ်လေး..
ဒီတပါတ် weeken ရဲ့မီနူး ရသွားပါပြီမေရေ။ လုပ်စားအုံးမယ်။ အရွက်က တော့ ရှာဝယ်ရမယ်။ ဆီမများ ပဲ စားကောင်းမယ် ့ဟင်းပဲ။ ငါးကတော့ ကြိုက်တဲ့ငါးသုံးလို့ရမယ်ထင်ပါ့နော်။ ငါးကြင်း။ တီလားဘီးယားလိုဟာမျိုး တွေလေ။ သားရေယိုပါသည်။